नेकपा अध्यक्षद्वयबीच चार दिनयता जारी छलफल बुधबार आएर झनै बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अब बिहीबार छलफल हुन्छ/हुन्न भन्ने टुंगो पनि छैन।
आइतबार आरोप/प्रत्यारोप चल्यो। सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र मंगलबार अध्यक्ष दाहालले आफ्ना कुरा खुलस्त राखे। सहमतिको उपाय खोज्न बुधबार साँझ दुई घण्टा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो।
त्यसपछि भने दुई नेताबीच चर्काचर्की परेको थियो। दुवै जना अडानमा टसमस नभएपछि प्रधानमन्त्रीले दाहालसँग भने, ‘तपाईंहरू स्थायी समितिमा बहुमत भएको मान्छे, बैठक राख्नुहोस्, म छोड्नेवाला छैन।’
दाहालले ओलीलाई भने, ‘तपाईंले के गर्न खोज्नुभएको ? मिल्ने कुनै बिन्दुमा लचक हुने कुरै गर्नुहुन्न ? पार्टी एकता गर्न मन छैन तपाईंलाई ? ’
ओलीले पनि दाहाललाई भने, ‘के गर्न खोजेको भन्ने त देखिहाल्नुभएको छ नि ! पार्टी एकता भए त हुन्छ नि तर हुँदैन भने के गर्ने ? ’
‘उहाँहरू (ओली र दाहाल)बीच छलफल भए पनि कुरा मिलेको छैन। बुधबारको छलफल पनि निकास दिने खालको भएन’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्को बैठकको पनि टुंगो लागेको छैन।’
ओलीले दाहालसँगको भेटपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नियमित भेटघाट भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। छलफल सकारात्मक नदेखिएपछि अब बैठक धेरै रोकिनराख्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई आफ्नै समूहका नेताले दबाब बढाउन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।